Wararka - WAA MAXAY WAXAAN U CAAWINAYNAA BALAASH BILAASH AH
Qiimo jaban, adeegsi habboon, si fudud u shaqaynta iyo soosaarista, culeys fudud, iyo guryaha jirka iyo kiimikada deggan, baco ayaa mar loo tixgeliyey inay ka mid yihiin agabyada “ugu guulaha badan” ee uu abuuray aadanaha taariikhda. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la raacayo xaddiga badan ee isticmaalka, xaddiga qashinka caagga ah ee la soo saaray ayaa waliba ku jira tiro.
Waxaa la og yahay in celceliska waqtiga bacda balaastigga ah uu yahay 25 daqiiqo. Tusaale ahaan, bacda wax lagu duubo, laga bilaabo in loo isticmaalo xirxirida ilaa la tuuro, waxaa jira toban daqiiqo oo aad u gaaban. Markay hawsha dhammaato, balaastikadaan waxaa loo diraa meelaha qashinka lagu shubo ama qashin -qubka, ama si toos ah loogu daadiyaa badda.
Laakiin waxaa laga yaabaa inaanan ogeyn, in ay qaadaneyso in ka badan 400 sano in la yareeyo bac kasta, oo ah 262.8 milyan daqiiqo…
Hcaag ma waxyeello baa?
Caagagga ayaa la soo sheegay inay dhibaato ku yihiin deegaanka badda tan iyo 1970 -meeyadii. Sannadihii ugu dambeeyayna, welwelka ka yimid bulshooyinka oo dhan ayaa noqday mid aad u sii kordhaya.
Inta badan qashinka wasakhaynaya Bay waa caag, kaas oo ku sii jiraya deegaanka boqolaal sano. 90% qashinka ku jira marinnada biyahayaga ma kobcinayo.
Daraasad ay samaysay Machadka San Francisco Estuary ayaa muujisay in warshadaha daaweynta biyaha wasakhda ee Aagga Bay ay San Francisco Bay ku sii daayeen qiyaastii 7,000,000 walxaha balaastigga ah, maaddaama shaashadooduhu aysan ahayn kuwo ku filan inay qabtaan. Microplastics waxay nuugaan wasakhda waxayna u hanjabaan duurjoogta cunaysa.
PCB -yadu waa walax kale oo sun ah oo sumaysa wasakhda Bay. PCB -yada waxaa laga helaa agab dhisme oo duug ah waxayna ku qulqulaan Baay iyagoo maraya qulqulka magaalooyinka.
Baaxadda nafaqooyinka ee Baay -sida nitrogen -waxay sababi kartaa ubaxyo algaal oo waxyeello leh oo khatar ku ah kalluunka iyo duurjoogta kale. Qaar ka mid ah ubaxyada algaalku sidoo kale waxay khatar u yihiin dadka, waxayna keenaan finan iyo xanuun xagga neefsashada ah.
Siyaasadaha mamnuucidda balaastigga
Wasakhaynta balaastigga badda ayaa noqotay mid aad muhiim ugu ah bay'ada dawladaha, saynisyahannada, ururrada aan dawliga ahayn, iyo xubnaha dadweynaha adduunka oo dhan. In kasta oo siyaasadaha lagu yaraynayo microbeads -ku ay bilaabmeen 2014, waxqabadyada bacaha balaastigga ayaa bilaabmay horaantii 1991 -kii.
- Aquariums waxay u wada socdaan “NO STRAW NOVEMBER”, Noofambar 1, 2018
- Caaga ayaa laga mamnuucay Maraykanka sannadkii 1979 -kii, iyo dhinaca caalamiga ah sannadkii 2001 -dii.
- Kanada waxay higsanaysaa inay mamnuucdo balaastikada hal mar la isticmaalo marka la gaaro 2021
- Peru waxay xaddideysaa caag hal mar la isticmaalo January 17, 2019
- SAN DIEGO wuxuu mamnuucay weelka cuntada iyo cabitaanka Styrofoam Jan 2019
- Washington, DC, mamnuucidda cawska caagga ah wuxuu bilaabmayaa Luulyo 2019
- “Mamnuucida caaga” ayaa hadda si rasmi ah looga hirgaliyay Shiinaha tan iyo 1 -dii Janaayo, 2021
Waraaqdu waxay noqon kartaa bedelka ciyaarta xaaladdan.
Maxay tahay xeeladayda baakadayntu haddii ay rabto in aan caag ka baxo? Waxay noqon kartaa su'aal maanka shirkado badan. Aagagga caanka ah ee wasakheynta caagga ah iyo meelaha soo ifbaxaya sida ganacsiga elektaroonigga ah, gaarsiinta degdegga ah, iyo gaarsiinta cuntada, ganacsiga e-commerce, gaarsiinta degdegga ah iyo warshadaha qaadista ayaa si xawli ah u koraya. Marka aysan jirin bac caag ah oo wax lagu iibsado cunto iyo qaadasho, oo aan lahayn caws caag ah marka la cabaayo cabitaan, taas oo shaki la'aan saamayn doonta nolol maalmeedka dadka intiisa badan. Maxaa loo beddeli karaa badeecadaha caagga ah?
Alaabta guriga u fiican iyo alaabta nadaafadda waa in aan laguugu soo dirin maaddad waxyeello u geysata meeraheena. Xaaladdan oo kale, maaddada nooleyn karta waa mudnaanta la tixgeliyo, taasi waa warqad. Mid ka mid ah warshadaha waraaqaha ugu waaweyn ee adduunka APP ayaa qorsheeyay yoolalkooda sannadka 2020 wuxuuna si firfircoon u qaatay dhaqammo waara si uu u gaaro himilooyinkiisa lagu qeexay Qorshaha Joogtaynta 2020. Warqaddeena kraft -ka iyo guddiyada isku -xidhka ayaa ah 100% baaba'a, sidoo kale dahaadhka noolaha waa mid nooleyn kara. Doorasho waarta oo ka dhex jirta isbeddelka caagga ah ee aan caagga ahayn.
Waqtiga dhejinta: Mar-30-2021